LEGO 40178 VIP စတိုးကို shop.LEGO.com မှာယူပါ
10 / 10 / 2017 09 / 10 / 2017 ဂရေဟမ် 1409 Views စာ0မှတ်ချက် ၄၀၁၇၈ VIP, အထူးအခွင့်အရေးရှိသော, အခမဲ့, Lego ဆိုင်, Lego စတိုး, ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း, shop.LEGO.com, VIP
တရားဝင် Lego အွန်လိုင်းဆိုင်သည်ပေါင် ၁၀၀ ကျော်မည်သည့်အမှာစာနှင့်မဆိုအခမဲ့သီးသန့်ဖြစ်သော VIP 40178 ကိုကမ်းလှမ်းသည်။
Lego 40178 VIP သည်တွဲဖက်ထားသောအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော VIP ကဒ်ကိုကိုယ်စားပြုသည် Lego စတိုး vignette, meta နည်းနည်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူအမာခံပရိသတ်များမှဆွဲဆောင်ရန်သေချာ။ အသင်းဝင်ရန်အခမဲ့ဖြစ်သော VIP အစီအစဉ်ကိုလက်မှတ်ထိုးသူနှင့်£ 100 သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောတန်ဖိုးကိုမှာယူသူမည်သူမဆို အခမဲ့အစုကိုရပါလိမ့်မယ်.
အတော်များများကမကြာသေးမီကဖြန့်ချိ Lego အစုံအပါအဝင်£ 100 ကိုတံခါးခုံကိုအထက်ဖြစ်ကြသည် Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi အစုံ 75189 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်အကြီးစား Assault Walker က နှင့် 75190 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်စတား ​​Destroyer - ပရိသတ်များအတွက်အကြီးမားဆုံးပြproblemsနာတစ်ခုမှာမည်သည့် ၀ ယ်ယူရန်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါအခမဲ့ set, 40178 VIP, ကောင်တာနောက်ကွယ်မှဝန်ထမ်း minifigure အသစ်တခု, သပ်သပ်ရပ်ရပ်စတစ်ကာများတစည်းများနှင့်သက်ဆိုင်ရာအားလုံးနှင့်အတူကြည်နူးဖွယ်အနည်းငယ်သာ vignette ပါရှိသည် Lego စတိုး အသေးစိတ်ကိုသေးငယ်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုသို့ပြည့်ကျပ်နေအောင်ထည့်။ ဒါဟာဆင်တူသည် Lego စတိုး 40145 ထားကြ၏, စတိုးဆိုင်အဖွင့်မှာများသောအားဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကိုနိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်အထိစတင်မည်ဖြစ်သော်လည်းမကြာသေးမီကခန့်မှန်းထားသည့်ပြissuesနာများကြောင့်စတော့ရှယ်ယာရှားပါးမှု၊ စောစောပိုင်းကထက်နောက်ပိုင်းတွင်အမိန့်နေရာချရန်ဆန္ဒရှိလိမ့်မည်.
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Ackbar ၏ရှည်လျားသောလမ်းပိုင်း
သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း LEGO NINJAGO ၏ကမ္ဘာပေါ်တွင် →